Myanmar Mobile Developer Team
Android Game များ
Android Firmware များ
Android Tutorial များ
IOS App များ
Jailbreak Tool များ
IOS Tutorial များ
MMDT မှ Post များကို Android ပေါ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ရန် apk လေးကိုဒေါင်းနိုင်ပါပြီ
MMDT FB Group ထဲသို့ဝင်ရန်
Join Now MMDT Group
Like လုပ်ပြီး Facebook မှ ဖတ်နိုင်ပါပြီ
Angry Birds Star Wars II v1.0.1.ipa လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီးခင်ဗျာ
Android USB Driver Collection (Portable)
11:03 PM ကွန်ပျူတာ software များ No comments
Driver လေးတွေ စုထားတာလေးကို တင်လို့ပြီးသွားပါပြီဗျာ....Portable လေးပါ....ဒေါင်းရတာ အဆင်ပြေအောင်4ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်..part 1.rar ဖိုင်လေးကို ဖြည်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ.....လွတ်လပ်စွာ ရှယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....ဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေသူများလည်း လမ်းကြုံရင် လာယူနိုင်ပါတယ်...ေိေိ....
"We Search , We Share"
Huawei G730 Shwebook Dictionary အသုံးပြုလျှင် မြန်မစာမပေါ်သောပြဿနာအား ဖြေရှင်းနည်း
5:32 PM Android App များ No comments
Huawei G730 Shwebook Dictionary တွင် မြန်မာစာ မမြင်ရသောသူများအတွက် apk လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်....ယခု apk လေးအတွက် credit ပေးထိုက်သူအားလုံးကိုလည်း credit ပေးပါတယ်ဗျာ... apk လေးကို အောက်တွင် ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ..........
Huawei G730-C00 Official Rom
4:53 PM Android Firmware များ2comments
Huawei G730-C00 အတွက် Official Rom Build No 152 ပါ...
Candy Crush Hacked apk v 1.18.0 (9999 lives 400 moves)
9:52 AM Android Game များ No comments
Candy Crush ချစ်သူတွေအတွက် hack ပြီးသား apk လေးပါ....
11:14 AM Android Tutorial များ No comments
Mobile Software Service လေ့လာသူတွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးနဲ့ နည်းလေးတစ်ခုပါ။ ဒီနည်းလမ်းကို ကိုသိန်းထိုက် (Thein Htite) မှရေးသားတင်ပြထားပါတယ်။
-ပထမဦးဆုံး အဲ့ဆော့ဝဲလေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ >>>> http://www.mediafire.com/download/myay0mwduda5etm/Cricket%20PST%201.0%20Huawei.rar
-ဆော့ဝဲကို စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းမော်ဒယ်ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ M860 ရွေးပါတယ် U8825d ဖန်ဝဲတင်ကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ (M860 မဟုတ်လဲ စိတ်ထဲထင်တာ တစ်ခု ရွေပေးလိုက်ပါ :D)
-ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။ဖုန်း usb debugging ဖွင့်ထားဖို့တော့လိုပါမယ်။
-Cricket PST ရဲ့ tab တွေထဲက ပထမဦးဆုံး multiple ဆိုတဲ့ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
-ပြီးရင် firmware ဆိုတာလေးကို အမှန်ခြစ်လိုက်ပါ ။
-ကိုယ်တင်မယ့် firmware ကိုရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
-ဒုတိယ အနေနဲ့ scan ကို နှိပ်ပါ။
-ပြီးရင် start downlaod ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
-ဖုန်းက အလိုအလျောက် ပန်းရောင် စကရင် ဆီရောက်ပြီး firmware တင်နေပါလိမ့်မယ်။
-100% ဆိုရင် ပြီးပါပြီ။ (ကျွန်တော်ပြောတာမရှင်းရင် screen shot ပြထားပါတယ် အောက်က လင့်မှာကြည့်လိုက်ပါ)
-ဖုန်းက restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ မကျရင် battery ဖြုတ်လိုက်ပါ ။
Credit To : http://www.myanmarmobileapp.com
Built In မြန်မာစာမပါသောAndroid ဖုန်းတချို့တွင် Built In မြန်မာစာစနစ်ထည့်သွင်းခြင်း
5:45 PM Android Tutorial များ 1 comment
ဒါကတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့Samsung Galaxy Tab2P3100 လေးဖြစ်ပါတယ်။။။
Version ကတော့ 4.2.2 ကိုတင်ထားပါတယ်…မြန်မာစာက Built in မပါတော့တော်တော်လေးစိတ်ညစ်
သူကတော့HTC One ကိုင်ပါတယ်…သူ့ဖုန်းကလည်း Built In မြန်မာစာမပါဘူးဆိုတော့သူလည်းရှာတွေ့
ဒီအောက်ကScreen Shot လေးကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဖုန်းလေးကိုစမ်းသပ်ထားတာပါ…..
ဒီApp လေးကတော့ MoreLocale2လို့အမည်ရတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့Appလေးဖြစ်ပါတယ်…
မှတ်ချက်။။ ။။ဖုန်းတိုင်းနှင့်အဆင်မပြေပါ…။Samsung တော်တော်များများနှင့်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်…
Sony တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်..(Xperi Z မပါပါ)…
ဒီAppလေးကိုဒေါင်းပြီးဖုန်းရဲ့ညာဘက်ထောင့်နားလေးက “Custom Locale”ကိုနှိပ်လိုက်ပါကအပေါ်ကပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်..
Language – my
Country – MM
ပြီးရင်တော့ Set ကိုနှိပ်လိုက်ပါ….
Permission တောင်းရင်တော့ Allowပေးပြီး ဖုန်းကိုRebootလုပ်ပေးပါ….
Software ပေးတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့Best Friend ဆောင်းညီဦးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Download Link For MoreLocale 2
Download From Drop Box
Galaxy S3 (I9300) Android 4.3 ကို System တစ်ခုလုံး မြန်မာစာစနစ် နှင့် Font အလွယ်သွင်းမယ်
9:45 PM Android Tutorial များ2comments
Galaxy S3 (I9300) Android 4.3 ကို System တစ်ခုလုံး မြန်မာစာစနစ် နှင့် Font အလွယ်သွင်းမယ် (System 97% Correct > Webpage 100% Correct)
Samsung Galaxy S3 (GT-I9300) Android Version 4.3 ကို System တစ်ခုလုံးမြန်မာလို လိုချင်သူတွေအတွက် အောက်က အဆင့်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားရုံပါပဲ။
အပေါ်က ပုံလေးအတိုင်း မြန်မာလိုလေးတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး ဇာတ်လိုက်က တော့ Root Explorer လေးပါပဲ။
Root Explorer ကို ဒေါင်းရန် >> Download Here
Step - 1 (Android Version 4.3 ကို Upgrade လုပ်မယ်)
Android 4.3 မတင်ရသေးတဲ့သူတွေက တော့ >> Watch Here
အခု ဒီအဆင့်ထိ ရောက်ပြီဆိုတော့ Android Version 4.3 ထိ တင်ပြီးပီလို့လဲ ယူဆပါတယ်။
တင်ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း USB Debugging နဲ့ Unknown Sources ကို ON ပေးထားရပါမယ်။
How to Enable USB Debugging on (GT-I9300) Android Version 4.3
Setting > More Tab > About Device
Tap Build Number7Times and U gotaMessage "You Are Now Developer"
Back > and u can see Developer Options and Enter it & Tap USB Debugging
How to Enable Unknown Sources on (GT-I9300) Android Version 4.3
Setting > More Tab > Security
and Tap Unknown Sources.....
ဒါတွေလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ မိမိရဲ့ဖုန်းကို Root လုပ်ရပါမယ်။
Step -2(ဖုန်းကို Root လုပ်မယ်)
GT-I9300 Android 4.3 Root >> Watch Here
အဲ့တာလေး ဖတ်ပြီးသွားရင် Root လုပ်ပြီးပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
Root လုပ်ပြီးရင်တော့ Apps ထဲမှာ SuperSu ဆိုပြီး စိန်တုံးလေးနဲ့ တွေ့ရပါမယ်။
Step -3(Root လုပ်ပြီးရင် မြန်မာစာသွင်းမယ်)
မြန်မာဖောင့်သွင်းဖို့ကိုတော့ ဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။
မြန်မာဖောင့်သွင်းခါနီးမှာ Android 4.2.2 ကနေစတဲ့ အတိုင်း အနက်ရောင် Box လေးတစ် Box ကျလာရင် Allow ကို Check လုပ်ပေးပြီး OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ Smart Zawgyi Pro ဖိုဒါထဲက Smart Zawgyi Pro.bat ကို Run ပါ။
ခေတ္တစောင့်ပါ။ စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ မိမိဖုန်း Screen ကို Lock Screen ဖွင့်လျှက်ထားပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်း ADB Shell ကို Superuser Request လာမေးပါမယ်။ ပုံပါအတိုင်း Grant ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းပာာ Reboot ကျသွားပြီး Smart Zawgyi Pro.bat ဖိုင်လေးမှာ Waiting For Devices ဆိုပြီး ပြနေပါမယ်။ ဖုန်းပါဝါပြန်တက်လာပြီး ခေတ္တအကြာမှာ Smart Zawgyi Pro က နဂို မူလအတိုင်း 1,2 ပြန်မေးတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့ ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီ။
ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းကို မြန်မာစာ လဲသွင်းပြီးသွားပါပြီ။
(ကီးဘုတ်ကိုတော့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မြန်မာကီးဘုတ် တစ်ခုခု ရွေးသုံးပါ။ e.g - Frozen, Bagan, Myan Pro, etc....)
Step -4(System တစ်ခုလုံးကို မြန်မာလိုပြောင်းမယ်)
System တစ်ခုလုံးကို မြန်မာလိုပြောင်းဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်က တော့ တစ်ဖိုင်ထဲပါ။ အဲ့ပာာလေးကို Root Explorer ကနေထည့်ပေးလိုက်ရမှာပါ။
မြန်မာစာစနစ်ဖိုင်ကို ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ "language.xml" ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို Internal Storage ထဲထည့်ပေးထားပါ။
ပြီးရင် အပေါ်မှာ ဒေါင်းထားတဲ့ Root Explorer လေးကို Install လုပ်ထားပါ။
(၁) Root Explorer ကိုဖွင့်ပါ။
(၂) Superuser Request တောင်းရင် Grant နှိပ်ပါ။
(၃) ပြီးရင် sdcard ဆိုတာလေးကိုရှာပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။
(၄) တွေ့လို့ ပွင့်သွားရင် language.xml ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို ထပ်တွေ့အောင်ရှာပါ။ တွေ့ရင် ဖိထားပြီး Copy နှိပ်ပါ။
(၅) ပြီးရင် Back ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပါ။
(၆) ဒီ Source လေးကို ထပ်သွားလိုက်ပါဦး။ "System > csc > "
(၇) ရောက်သွားရင်တော့ အောက်နားလေးက Paste ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
(၈) Overwrite လုပ်မလားမေးရင်တော့ Yes ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို Restart လုပ်လိုက်ပါ။
ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ Setting > My Device Tab > Language and input ကိုနှိပ်ပါ။
အပေါ်ဆုံးက Language ထဲကို ထပ်ဝင်ပါ။
အောက်ဘက်ကို ဆက်ဆင်းပြီး "Myanmar(Zawgyi)" ဆိုတာကိုရှာပြီး နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းလေးကို မြန်မာစာစနစ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့.... :)
Credit & Special Thanks to > Djjoeman
> Ko Kyaw Swar Thwin
Credit To : http://sony-samsung.blogspot.com
V root 1.7.3 latest version (15.11.2013)
10:50 AM root လုပ်နည်းများ No comments
Vroot လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Android User တွေ မသိသူမရှိလောက်ပါဘူး...
15.11.3013 ထွက် Vroot latest version လေးကိုအောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါပြီ.....
7:28 PM အထွေထွေဗဟုသုတများ2comments
MTK ဖုန်းတွေ IMEI ပြန်ရေးနိုင်မယ့် ZOPO_IMEI.apk
7:08 PM Android App များ 1 comment
MTK Device တွေမှာ IMEI ပြန်ရေးနိုင်မယ့် apk လေးတွေ့လို့ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ် ...
မူရင်းကတော့ IPA Cracker ပါ ... ဒီ apk ကို MTK အတွက်လို့ရေးထားပါတယ် ...
အခြား china ဖုန်းတွေလည်း စမ်းချင်ရင်စမ်းကြည့်ပေါ့ ...
ပုံမှာပြထားတာကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘက်စုံသုံးဖုန်းလေး Huawei U8825D နဲ့ပြထားပါတယ်ဗျ ...
[မှတ်ချက် - ကျွန်တော်မစမ်းရသေးပါ ... ]
==> ZOPO_IMEI.apk v.1.3.1<==
Android 2.1 + ...
Credit To : http://mm-mpxteam.net
Huawei U8818 နဲ့ U8815 တွေကို 4.0.3 မှ 2.3.6 သို့ ပြန်ဆင်းနည်း။
5:19 PM Android Firmware များ No comments
အရင်ဆုံးကတော့ Just do your own risk! ပေါ့နော်။ သေချာစဉ်းစားပြီး သေချာမှ လုပ်ပါ။
ထပ်ပြောပါမယ် JUST DO YOUR OWN RISK!
အရင်ဆုံး အောက်ကကောင်လေးကို download လုပ်ပါ။
အခု အောက်ပြန်ဆင်းချင်တဲ့ 4.0.3 ဟာ Root Access ရရှိပြီးသား ဖြစ်ရပါမယ်။ မဟုတ်သေးရင်တော့ အရင်ဆုံး Root လုပ်လိုက်ပါ။ မိမိ နှစ်သက်ရာနဲ့ Root လုပ်နိူင်ပါတယ်။ အခြားသော နောင်တော်ကြီးများ တင်ပြီးသား ဖြစ်သည့်အတွက် ပြန်မရေးပေးတော့ပါဘူး။ အမြစ်မတူးရသေးတဲ့သူများ ကြိုက်ရာ နည်းလမ်းများဖြင့် အမြစ်တူးပါ။
ကဲ…..အမြစ်တူးပြီးသား ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ ..စမယ်ဗျာ။။။။။။ရယ်ဒီ ၀မ်း…တူး….ဟီး ။
ဒေါင်းလို့ ရတဲ့ကောင်လေးကို zip ဖြည်လိုက်ပါ။ အထဲမှာပါတဲ့ toolbox5irom.apk လေးကို ဖုန်းမှာ install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အဲကောင်လေးကို သုံးပြီး IMEI ကို Backup လုပ်ပါ။(This is important!) အကယ်၍ backup လုပ်တာ မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဖုန်းဟာ Root Access မရသေးလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြုံတုံးလေး တစ်ခုလောက်ြေ့ပာပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Root တယ်။ အမြစ်တူးတယ် ဆိုတာက ရိုးရိုး သာမာန် End User အဆင့်ကနေ Advance User အဖြစ် ပြောင်းလဲ ခံယူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ယူလိုက်ရင် ဖုန်းမှာ ပါတဲ့ Warranty ပျက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ End User နဲ့ Advance User ရဲ့ အဆင့်ကွားခြားချက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
End User ဆိုတာက သာမာန် အသုံးပြုသူပါ။ သူက နဂိုစက်ရုံထုတ်အတိုင်း အသုံးပြုတာပါ။ ဆိုလိုချင်တာက Android ဖုန်း တစ်လုံးကို သုံးရင် ဖုန်းပြောမယ်။ Builtin ပါတဲ့ App တွေ၊ ဆိုင်က ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဂိမ်းတွေ ဆော့မယ်။ ကိုယ်ဆော့ချင်တာလေး တွေ့ရင် ဆိုင်မှာ သွားသွင်းမယ် ဆိုတာလောက်ပဲ သိတဲ့၊ သုံးတဲ့ User မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Advance User ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းကို ကိုယ်တိုင် Modify လုပ်နိူင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် အမျိုးမျိုး စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သုံးစွဲနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။ ဆိုရရင် ဖုန်းတော်တော်များများက မြန်မာစာကို Builtin အနေနဲ့ မပါပါဘူး။ အဲဒါကို မြန်မာစာဖောင့်ထည့်သုံးမယ်။အဲဒီလိုထည့်တဲ့နည်းက အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ သူ့မှာ နဂို ပါတဲ့ font ကို Modify လုပ်ထားတဲ့ နာမည်တူမြန်မာfont နဲ့ အစားထိုးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် zawgyione ကို သွင်းတယ်။ Font Changer သုံးတယ်။ အမျိုးမျိုးသော နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ပါစေ။ သူ့ရဲ့ Original System ကို ပြောင်းလဲ လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Advance User ဆိုတာက End User ထက် အဆင့်ပိုမြင့်ပါတယ်။
ဒီလို ဒီလိုတွေကြောင့် Advance User ဆိုတာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိူင်တဲ့အဆင့်ရှိသည်အတွက် Damage Attack တွေ ဖြစ်စေနိူင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Advance User အဖြစ်ခံယူလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် Warranty က အကျုံးမ၀င်တော့ပါဘူး။
Root လုပ်တာမှာလည်း SuperUser(or) SuperSU app လေး ပေါ်လာတိုင်းလည်း Root Access မရပါဘူး။ အားလုံးမဟုတ်တောင် တစ်ချို့တစ်လေတော့ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲဒါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ SuperUser အလုပ်မလုပ်(မနိုးသေး)လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပေးရရင်..battery အသစ်တစ်လုံး ၀ယ်တယ်ဗျာ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာချက်ချင်း အသုံးပြုလို့ မရသေးဘူး။ Shock တိုက် ပေးလိုက်မှ အလုပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။ (ဟီး….SuperUser နိူးဖို့တော့ Shock သွားမတိုက်နဲ့နော်) SuperUser နိူးဖို့ဆိုရင် သူ့ကို version အမြင့် သွင်းပေးလိုက်ပါ။ နိူးလာပါလိမ့်မယ်။
ကဲကဲ…မဆိုင်တာတွေ ထည့်ပြောလိုက်တာ တော်တော်များသွားပြီး ပြန်စမယ်နော်။
Root Access ရပြီးသား ဆိုရင်တော့ toolbox5irom.apk လေးကို သွင်းလိုက်ပါ။သူ့ကို သုံးဖို့ Root Access တောင်းပါတယ်။ ။IMEI ကို Backup လုပ်ပါ။ ခဏစောင့်ရပါတယ်။ Complete ပြရင် file manager သုံးပြီး SD Card ထဲမှာ 5irom ဆိုတဲ့ ဖိုဒါလေးကို ရှာလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီဖိုဒါလေးကို imeibackup ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းပေးပါ။(မိမိနှစ်သက်ရာ နာမည်ကို ပြောင်းနိူင်ပါတယ်)။ နာမည်ပြောင်းပြီးသားကောင်လေးကို Computer မှာလည်း Copy ယူထားပါ။တစ်ခုခု အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင် ယူသုံးလို့ ရအောင်ပါ။အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးရင် ဖြည်ထားတဲ့ဖိုဒါထဲမှာပါတဲ့ 5irom ဆိုတဲ့ ဖိုဒါလေးကို SD Card ထဲကို ကူးထည့်ပါ။ ပြီးရင် (*#06#)ကို နှိပ်ပြီး ဖုန်းရဲ့ IMEI ကို ကြည့်ပြီး ရေးမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်း ပြန်ပြီး Restore လုပ်တဲ့အခါမှာ ပြန်စစ်ကြည့်ဖို့ပါ။
ကဲ…….အပေါ်က အဆင့်တွေကို တစ်ဆင့်ချင်း သေချာ လုပ်ပြီးပြီလား ဆိုတာလေး ပြန်စစ်ပါ။နောက်ပြီး နောက်ဆုတ်ချင်ရင်လည်း ဒီအချိန်မှာ နောက်ဆုတ်လို့ ရပါတယ်။
ကဲ..ဆက်မယ်နော်။သွင်းထားတဲ့ Toolbox5irom ကို ဖွင့်ပြီး IMEI Restore လုပ်လိုက်ပါ။ Complete ဖြစ်သွားပြီလို့ ပြတာနဲ့ ဖုန်းကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် IMEI ကို တစ်ချက်ပြန်စစ်ပါ။0ဒါမှမဟုတ် စောနက မှတ်ထားခဲ့တဲ့ သင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် IMEI မဟုတ်တော့တာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းခေါ်ကြည့်ရင်တော့ SIM Cardကို သိမှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။System Busy နဲ့ပဲ တွေ့နေမှာပါ…..ဟိဟ။ိ
ကဲပြီးရင်တော့ 2.3.6 Official Firmware ကို ဒေါင်းထားပါ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက build no. နောက်ဆုံးက Bxxx နဲ့ ဆုံးတဲ့ကောင်ကိုပဲ သုံးစေချင်ပါတယ်။ အခြား SPxxx နဲ့ဆုံးတဲ့ကောင်တွေက စက်တိုင်းနဲ့ အဆင်မပြေတတ်လို့ပါ။ ပြီးရင် ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်။ Firmware ဒေါင်းပြီးမှတော့ ဘာလုပ်ရမလဲ မေးမနေပါနဲ့။ Firmware တင်လိုက်ပါ။ တင်ပုံတင်နည်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း dload ဖိုဒါလေးထဲမှာ UPDATE.APP ဟုတ်ရဲ့လား စစ်။ဟုတ်တယ်ဆိုရင် dload ဖိုဒါလေးကို SD Card ထဲကိုထည့်။ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်။ဘက်ထရီကို ၁၀စက္ကန့်လောက် ဖြုတ်ထား။ ပြီးရင် ပြန်တပ်။ (Vol Down +Vol Up+Power) သုံးခုလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း ဖိနှိပ်။ဒါမှ မဟုတ် ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့်ထား။Setting>Storage>Software Upgrade ဆိုတာကနေ တင်ပါ။ Step 1 Unpacking ဆိုတာကနေ စပြီး သူ့ဘာသာ လုပ်သွားမယ်။ Auto Restart ကျသွားပြီး ပြန်တက်လာတာနဲ့ Firmware တင်တာ ပြီးပြီပေါ့နော်။
Root လုပ်ပါ။ Root Access ရတာနဲ့ Toolbox5irom.apk လေးကို install လုပ်ပါ။ စောနလေးက imeibackup လို့ နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ ကောင်လေးကို 5irom ဆိုပြီး မူလ နာမည်ကို ပြန်ပြောင်းပေးပါ။ ပြီးရင် Toolbox5irom ကိုဖွင့်။ IMEI Restore လုပ်လိုက်ပါ။ Complete ပြတာနဲ့ Restart ချပေးပါနော်။(လုံးဝမမေ့ပါနဲ့)။ပြန်တက်လာရင် (*#06#) နဲ့ IMEI ကို ပြန်စစ်လိုက်ပါ။ နဂိုမူလ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် IMEI ဖြစ်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ Downgrade ဆင်းတာ အောင်မြင်သွားပါပြီ။ version လေးကို လည်း ကြည့်ကြည့်ပါအုံး 2.3.6 ဟုတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ :P ။ဖုန်းပြန်ခေါ်လို့လည်းရပါပြီနော်။
Credit To : http://mobileandtechnologyfield.blogspot.com
Huawei ဖုန်းတွေမှာ IMEI ပျောက်သွားလို့ စိတ်ပူနေတာလား
5:09 PM Android Tutorial များ 10 comments
Huawei Smart ဖုန်းတွေမှာ IMEI ပျောက်ပြီး ဖုန်းခေါ်မရသူတွေအတွက် လာပါပီခင်ဗျာ.....
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဖုန်းရဲ့IMEI ပျောက်မပျောက် အရင်စစ်ဆေးပါ့မယ်…....
စစ်ဆေးပုံကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ *#06# ကိုနှိပ်ပြီးစစ်ဆေးလိုက်ပါ.......
IMEI မှာဘာမှမပေါ်တော့ပါဘူး.....ဒါမှမဟုတ်....null ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့သေချာပါတယ်…
Huawei U8825D နဲ့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်.......
- ပထမဆုံး Dialer ကနေပြီးတော့ *#*#2846579#*#* ကိုနှိပ်ပြီး engineering mode ကိုဝင်လိုက်ပါ…..
- ပြီးရင်တော့ ProjectMenu/Background setting/Usb ports setting and select Manufacture mode
- ပြီးရင် Back Key ကိုနှိပ်ပြီး Background setting ကိုဝင်ပြီး Qualcomm background open setting ကိုသွားပါ ပြီးရင်တော့ background open ကိုရွေးပါ (pass is0(ZERO))
- ပြီးရင်တော့ဖုန်းကိုUnknown Source နဲ့ USB Debugging ကို On ထားလိုက်ပြီး ဖုန်းကို Restart ချလိုက်ပါ.....
- ကွန်ပျူတာမှာတော့ DFS Tool ကို Install လုပ်ပါ..........DFS Tool မရှိပါက
http://cdmatool.com/Demo မှာဒေါင်းလိုက်ပါ.....Install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ DFS Tool ကို run ပြီးဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ........
- ပြီးတော့Ports ကိုသွားပြီး dbAdapter Reserved Interface ကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ...........
- ပြီးရင်တော့ Ports Window ကိုပိတ်လိုက်ပါ….
- Programming tab ကိုရွေးလိုက်ပါ..ပြီးရင်တော့ IMEI အကွက်ထဲမှာ မိမိဖုန်းရဲ့ IMEI နံပါတ်ကို မှန်ကန်စွာရိုက်ပြီး write လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ.............
- ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Ports ကိုပြန်သွားပြီး dbAdapter Reserved Interface ကို disabe လုပ်လိုက်ပါ...........
- ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါ........
- ပြီးရင်တော့ engineering menu ကိုပြန်ဝင်ပါ.......
- ပြီးရင် ProjectMenu/Background setting/Usb ports setting and select Normal mode ကိုပြန်ရွေးပါ..........
- ပြီးရင် Background setting ကိုပြန်ဝင်ပြီး Qualcomm background open setting ကိုဝင်ပြီး background close ကိုရွေးလိုက်ပါ......
- ပြီးရင်တော့ဖုန်းကို Restart လုပ်လိုက်ပါ...........
ပြန်တက်လာရင် Sim-Card ထည့်ပြီးအသုံးပြုလိုက်ရုံပါဘဲ……
Huawei C8812/ C8813/ U8818 တွေ မှာ အဖြစ်များ တဲ့ Image signature verify fail ကို ရှင်းနည်း
4:48 PM Android Tutorial မျာ3းcomments
Huawei C8812/ C8813/ U8818 တွေ မှာ အဖြစ်များ တဲ့ Image signature verify fail ဖြစ်ရင် ရှင်းဘို့ ပါ လုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ် လုပ်ချင်တဲ့ မော်ဒယ် ကို ဒေါင်းလုပ် ဆွဲ ရလာတဲ့ Zip ကို ဖြည်အထဲက dload ဖိုဒါ ကို Sdcard ထဲ ကူးထည့်ပြီး Volume + & - & Power တွဲနှိပ်ပြီး Firmware တင်သလို တင်လိုက်ယုံ ပါဘဲ နော် ( အလုံးတိုင်းတော့ အဆင်ပြေချင် မှ ပြေမယ်နော် )
Credit To : ကိုနေလ (MMUG)
2:33 PM IOS Firmware များ No comments
Updates in 7.0.3 include:
- Updates lock screen to delay display of “slide to unlock” when Touch ID is in use
Credit To : http://thantoeaung.blogspot.com
Y220T recovery ခေါ်နည်းနဲ့ firmware တင်နည်း
Install Myanmar Font Without Root Or Reclaim your Warranty even phone is rooted !
Android ဖုန်း/Tablet များကို Pattern Lock ဖြုတ်နည်း (Manually)
C8813D Official Firmware
Android App များ (38)
Android Firmware များ (28)
Android Game များ (69)
Android Tutorial များ (55)
CWM Recovery Mode ထည့်သွင်းနည်းများ (4)
IOS Firmware များ (4)
IOS Tutorial များ (18)
Jailbreak Tool များ (1)
Mobile သတင်းများ (5)
root လုပ်နည်းများ (40)
ကွန်ပျူတာ software များ (15)
Angry Birds Star Wars II v1.0.1.ipa လေးကို တင်ပေးလ...
Copyright © MMDT | Powered by Blogger